Ama-terminals we-iPhone | Izindaba ze-IPhone (Ikhasi 4)
Imibala emisha ye-iPhone Xr ihlungiwe kuwebhusayithi esemthethweni yakwa-Apple: ophuzi, amakhorali nokuningi
Amahora nje ukusuka ku-Keynote ka-Apple, imibala emisha lapho kuzothengiswa khona i-iPhone Xr entsha engu-6,1-intshi.
Lawa kungaba ngamagama we-iPhone elandelayo
Okubonakala kungamagama e-iPhone entsha ezokwethulwa yi-Apple ngoLwesithathu oluzayo, kanye namanani ayo, kuhlungiwe.
I-Apple ngeke isebenzise inzwa yezigxivizo zeminwe ngaphansi kwesikrini
Phakathi nezinyanga zamanani ekwethulweni kwe-Face ID, kwakukhona amahemuhemu amaningi athi i-Apple ne-Samsung babenezinkinga, i-Apple izoqhubeka nokungasebenzisi inzwa ngaphansi kwesikrini, ukutholwa okuzoba kukhulu kakhulu ku-ecosystem ye-Android .
I-Apple Iqalisa Uhlelo Lokumiselela Lamahhala lwe-iPhone 8s enezinkinga ze-Motherboard
Yonke imishini ye-elekthronikhi inesibopho sokwephuka, kungekudala, ngenxa yokusetshenziswa kwayo noma ngenxa yokukhubazeka kokwenza. I-Apple Izinsizwa ezivela eCupertino zidale uhlelo olusha lokushintshwa lwawo wonke ama-iPhone 8 anezinkinga nge-motherboard
Le kuzoba yi-iPhone XS entsha (izithombe ezisemthethweni ze-Apple)
Izithombe ze-iPhoen XS entsha ziyahlungwa ngemuva kwamasonto amabili yethulwe, ziqinisekisa osayizi ababili nombala wegolide omusha
Kusemthethweni: ngoSepthemba 12 sizobona i-iPhone entsha
U-Apple wenze ngokusemthethweni usuku lokwethulwa kwe-iPhone entsha: Septhemba 12 ngo-19: 00 kusihlwa eSpain naseSteve Jobs Theatre
IDigiTimes ilinganisela ukuthi i-Apple izothengisa amayunithi ayizigidi ezingama-70-75 we-iPhone entsha
Qaphela idatha esanda kukhishwa ku-DigiTimes kumanani wokuthengisa alinganiselwe amamodeli amasha ...
USepthemba 12 kuzoba umcimbi wokwethula i-iPhone entsha, ngokusho kwesiteshi somsakazo saseFrance i-Europe 1
Yize umcimbi ngamunye owenziwa yi-Apple unyaka wonke, sibona ngamunye walabo ababambe iqhaza kulo mcimbi ngokwemvelo. ukukhanya okulandelayo ngo-Septhemba 12.
I-iPhone entsha izoba nokuthuthuka kukhamera futhi ngaphandle kwe- "Plus" egameni
UMark Gurman usimemezela ukubuka kuqala kwalokho i-Apple engakuletha ku-Keynote elandelayo ngo-Septhemba: ama-iPhones amathathu amasha anezikrini ezahlukahlukene.
Ividiyo yamasentimitha amabili okuthiwa yi-iPhone 6,1 no-6,5
Ngemuva kwezithombe zokuqala lapho ungabona khona lawa ma-intshi amasha we-iPhone 6,1 no-6,5 ...
Isikrini se-LCD esigcwele esigcwele nama-bezels amancane we-iPhone 6,1 ″
Amahemuhemu aqhubeka nokufinyelela kunethiwekhi mayelana namatheminali amasha we-Apple azokwethulwa ngenyanga ezayo ...
I-iPhone X ishaye elinye irekhodi, lelo lokuba nentengo ephezulu kakhulu ekuthengisweni kwesekeni
Futhi iqiniso ukuthi i-smartphone yakwa-Apple isivele ibiza kakhulu kunazo zonke inkampani ezithengisile ...
I-LG ifinyelela esivumelwaneni ne-Apple ukuhlinzeka ngezikrini ze-OLED ne-LCD
AbakwaSamsung babe nodumo, ukulubiza ngandlela thile, lokuba ngumkhiqizi omkhulu futhi cishe kuphela wesikrini sokuqala se-iPhone esinobuchwepheshe be-OLED. Imodeli elandelayo ye-iPhone, kubonakala sengathi ngeke yenziwe kuphela ngamaphaneli we-Samsung OLED, kepha i-LG izoba ngomunye wabahlinzeki, yize ngesilinganiso esincane
I-Apple yethula i-'Memory ', indawo entsha yokuqhakambisa i-Face ID ye-iPhone X
Abafana abavela kuCupertino bafuna ukuqhubeka nokukhangisa i-Face ID ye-iPhone X ngendlela yokuqala kakhulu enendawo entsha yeMemori.
UMing-Chi Kuo uthi sizobona ama-iPhones amasha aluhlaza okwesibhakabhaka, owolintshi nokubomvu
Amahemuhemu ngemibala emisha engaba khona ye-iPhone awamasha nhlobo kubahlaziyi naku ...
Iphutha le-IPhone 53 libiza i-Apple e-Australia $ 9 million
Ukuhlanya kuka-Apple kokwethula isoftware okuvimba ushintsho olwenziwe kule divayisi ngemihlangano yokufundisana engagunyaziwe kuyibize inhlawulo eyi- $ 9 million yase-Australia.
Lokhu kungaba yi-iPhone SE ebiza izindleko i-Apple ezokwethula le 2018
Siphinde sibone amahemuhemu we-iPhone SE elandelayo, i-iPhone ebiza izindleko ephansi ye-Apple ezofika nama-intshi ayi-6.1, kanye notch odumile we-iPhone X.
Ukumelana kwamanzi kwe-iPhone X kuyivumela ukuthi iphile amasonto ama-2 acwilisiwe emfuleni
Lapho ngibona izindaba zalokhu angikwazi ukuzibamba kodwa ngibheke emuva bese ngicabanga ngalezo zikhathi lapho ...
Emahoreni ambalwa ngaphambi kwe-WWDC, i-Apple ibuya nenye indawo nge-Animoji Karaoke
Imishini yokumaketha yakwa-Apple iqala ukushisa amahora ngaphambi kweWWDC elandelayo yokuvula iKeynote enendawo entsha ene-Animoji njengabaphikisi.
Ukuvela kwe- "render" okulingisa ukuthi i-iPhone LCD enesikrini esingu-6,1-intshi kungabukeka kanjani
Uma konke kuqhubeka njengoba bekuhleliwe, sizoba nama-iPhones amasha ngoSepthemba ozayo. Futhi enye yazo kuzoba yi-LCD ye-6,1-inch LCD. Lapha ukunikezwa kokugcina kule modeli
Ngonyaka ozayo wonke ama-iPhones anesikrini se-OLED
Eminye imithombo engekho emthethweni iqinisekisa lokho ebesikade sikhuluma ngakho isikhathi eside nokuthi i-Apple izokuya ezikrinini ...
Inani labasebenzisi abanekhefu lekhamera le-iPhone X liyakhula
Izinkinga zokuqala ezihlobene ne-iPhone X ziqala ukufika, izinkinga ngokuqhekeka kwengilazi yekhamera yangemuva.
U-Apple wayezazi izinkinga ze- "Bendgate" ne- "Touch disease" kudala ngaphambi kokuba azivume
Imibhalo yecala elibhekene ne-Apple ngezinkinga ze- "Touch disease" ze-iPhone 6 Plus ikhombisa ukuthi inkampani yayazi ngale nkinga kudala ngaphambi kokuyivuma.
Ividiyo yokuqhuma kwe-iPhone 6 edala ukungabaza okuningi
Kuyiqiniso ukuthi kwezinye izikhathi siye sabona amabhethri esha noma ngisho nabasebenzisi abashiswe yiphutha elithile ...
I-Apple ishicilela ividiyo entsha egqamisa imodi ye-portrait ye-iPhone X yayo
I-Apple ibuyela ekulayisheni ngomunye wemisebenzi emihle kakhulu ye-iPhone X nangaphambilini: imodi ye-portrait nomsebenzi we- "Portrait lighting"
Amahemuhemu we-iPhone SE 2 onomklamo ofana nokubuyiswa kwe-iPhone X ngenxa yokuvuza kwezesekeli
Emasontweni ambalwa ngaphambi kokuvulwa kwe-WWDC elandelayo iKeynote, amahemuhemu we-iPhone SE 2 entsha enesikrini esifana naleso se-iPhone X ebuyayo ngenxa yokuvuza kwezesekeli zayo.
Ukunakwa, uma une-iPhone 7 kungadingeka ukuthi ulungise imakrofoni
I-Apple ngabe ithumele isekhula kubathengisi bayo bePrimiyamu, abasabalalisi abagunyaziwe, bevuma ukuthi banenkinga ngemibhobho ye-iPhone 7.
Abakwa-LG bathi abakopisanga inothi le-iPhone X ku-LG G7
Inkampani yaseKorea i-LG, iqinisekisa ukuthi ukwakheka kwe-G7 entsha, kukude ngaphambi kokwethulwa kwe-iPhone X, isitatimende esenziwe kwabezindaba baseKorea ngemuva nje kokwethula i-flagship yayo entsha
Ukungasebenzi kahle kwe-Apple ukuthola imali ethe xaxa ngoshintsho lwebhethri?
Sinetafula icala elingajwayelekile esazi indlela i-Apple esebenza ngayo, kepha asikwazi ukusho ...
I-Amazon ivuselela uhlelo lokusebenza ukuzivumelanisa nesikrini se-iPhone X
Uhlelo lwe-Alexa, esingakwazi ukuphatha nokusebenzisana nalo ngamadivayisi we-Amazon Echo smart, ekugcineni lubuyekezelwe esikrinini esingu-5,8-intshi nge-notch ye-iPhone X.
I-CIRP inikeza idatha yayo yokuthengisa ye-iPhone futhi ihlukaniswe kakhulu
Njengoba kuhlala kwenzeka ngezibalo zokuthengisa ze-Apple, umhlaziyi ngamunye uthi owabo, kepha ku ...
Amahemuhemu amaningana aqinisekisa ukuthi i-iPhone SE izofika ngenyanga kaMeyi
Amahemuhemu aqala ukudlondlobala: sizoba ne-iPhone SE entsha enezici ezifana ne-iPhone X, chip ye-A10, futhi asikho isixhumi se-minijack.
I-Apple ibhalisa i-iPhone SE entsha ezinyangeni ezimbili ngaphambi kweWWDC 2018
Amarekhodi amasha e-EEC akhomba ekwethulweni okuseduze kwalokho okungaba yimodeli entsha ye-iPhone SE engafika ngoMeyi noma ngoJuni
Abakwa-Samsung banelungelo lobunikazi "ikhophi" lokuqala le-iPhone X
Isikhondlakhondla sobuchwepheshe baseKorea besizobe sinelungelo lobunikazi obekungaba yi-smartphone yaso elandelayo. I-terminal entsha enezici ezifanayo ne-iPhone X, futhi yebo, nayo izoba nenothi ephikisanayo.
Ungayisebenzisa kanjani imodi emnyama ku-Twitter
Enye yezinhlelo zokusebenza zakamuva ezikhethe ukwengeza ingqikithi emnyama phakathi kokumiswa kwayo i-Twitter, itimu enhle ongayisebenzisa lapho usebenzisa uhlelo lokusebenza ngokukhanya okuphansi.
Le ndlela i-iPhone 8 (PRODUCT) RED ibukeka ngayo njengama-unboxings okuqala
Akungabazeki ukuthi idivayisi eyethulwe yi-Apple enombala omusha obomvu iyamangalisa, ibuye inikele ngengxenye ye ...
Landa amaphephadonga akhethekile we-iPhone 8 (PRODUCT) RED entsha
Thola isithombe sangemuva esisha se-iPhone 8 (PRODUCT) RED entsha esungulwe yi-Apple ngokubambisana neRED, inhlangano elwa ne-HIV.
Kusasa ungathenga i-iPhone 8 (PRODUCT) RED ngombala omnyama!
I-Apple ayilindanga ngalesi sikhathi futhi amahemuhemu afike izolo ntambama avele ...
Ukunikezwa okuthakazelisayo kwe-iPhone egobile yesikhathi esizayo kusibuyisela emuva kuMatrix
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule izindaba zaqhamuka lapho kwakukhulunywa khona nge-iPhone egobile yesikhathi esizayo. Futhi umklami uMartin Hajek wethule "ukunikela" kokuqala kwalo mbono
I-Apple ingathola i-iPhone enesikrini esiphendula ukuthinta ngaphandle kokuyithinta futhi egobile
I-Apple ingathola i-iPhone enesikrini esiphendula ukuthinta kepha ngaphandle kokuthinta isikrini. Futhi, bengizokhipha i-concave iPhone enesikrini esigobile.
Impilo yebhethri ye-iPhone 8 Plus ne-iPhone X ingcono kuneye-Galaxy S9 entsha
Futhi, zombili i-iPhone 8 Plus ne-iPhone X zinikela ngokusebenza okuphezulu kwebhethri kune-Samsung Galaxy S9 ne-S9 +.
ILogitech Crayon entsha isebenza kuphela ne-iPad yesizukulwane sesi-6
Ipensela le-Apple elishibhile elilindelwe elivela kubafana baseCupertino, libizwa ngeCrayon, linentengo yamadola angama-49 futhi lizohambisana ne-iPad 2018 kuphela
Olandelayo ozothatha izintambo ku-iPhone X angaba ngu-5,8% eshibhile
Isizukulwane esilandelayo i-iPhone X izoba nge-10% eshibhile ngenxa yezindleko eziphansi zokukhiqiza.
Ngabe i-iPhone X yegolide ngabe isondele ukwethulwa?
Ngaphandle kokungabaza lokhu kungaba amahemuhemu eqiniso lapho sibona umzila we-iPhone nemibala yayo. Iphone…
I-Apple icela amapaneli angaba yizigidi ezingama-270 ama-iPhones alandelayo
Ingxenye eyodwa ye-iPhone X edale izinkinga ku-Apple ngokusatshalaliswa kwayo nokuthengiswa kwayo ngokungangabazeki ...
"Vula shazi" yividiyo entsha yokukhangisa ye-iPhone X
U-Apple uthumele ividiyo entsha esiteshini sayo se-YouTube lapho singabona khona, ngethoni yamahlaya, ukuthi i-Face ID isebenza kanjani
Ucwaningo olusha olwenziwe yiLoup Ventures, luhlose ukwazi ukuthi uzoyishintsha yini i-iPhone yakho ekwindla
Ucwaningo nabahlaziyi basesimweni sokushisa kakhulu kulezi zinyanga futhi kulokhu sifuna ukukhombisa inhlolovo ...
Abahlaziyi beCiti banikeza izibikezelo ezimbi kakhulu zokuthengisa ze-iPhone X
Futhi iqiniso ukuthi kukhona amafemu abahlaziyi abaningana njengamanje esinikeza izibalo zokuthumela nezibikezelo zokuthengisa ...
Manje njengoba wonke umuntu ewakopisha, i- "notch" inganyamalala ku-iPhone ye-2019
Ukuphazamiseka kwempilo futhi kungenxa yokuthi ngemuva kokuningi kangangokuba idizayini entsha ye-iPhone X bekufanele ikhulume ngayo ...
I-iPhone X, i-Apple Park nokushaywa okubhekene namawindi ayo. Konke kwabhalwa ...
Futhi ayikho indlela yokuba nesikhathi esiningi kule mpilo ukuthola le mininingwane ekhombisa ...
Umqondo wevidiyo we-IOS 12 onetimu emnyama elindelwe isikhathi eside
Sikukhombisa umqondo wokuqala wokuthi inguqulo yeshumi nambili yesistimu yokusebenza ye-Apple yamadivayisi eselula ingahle ibukeke kanjani, umqondo ovelele ngokunikela ngendikimba emnyama nokubuyiselwa kokugeleza kwekhava.
Kungani abantu bengathengi ama-iPhones amasha? Impendulo ilula, ngoba le abanayo ibasebenzela kahle.
Izikhathi eziningi senza impilo yethu ibe nzima sicabanga ngezizathu ezingaholela umsebenzisi noma abasebenzisi ukuthi bacabange ...
Ngaphambili nangemva kwe-iPhone 6S ngemuva kokushintsha ibhethri
Ngabe ufuna ukubona ukuthi ukusebenza kwe-iPhone yakho kwehla kanjani lapho ibhethri ingekho ku-100%? Nayi ividiyo ekhombisa ngaphambi nangemva kokufakwa esikhundleni kwebhethri
I-iPhone X ishanela imiklomelo enikezwe kwi-MWC yalo nyaka
Ngesikhathi seMobile World Congress ebanjelwe eBarcelona, ​​phakathi naleli sonto uchungechunge lwemiklomelo lunikezwa i ...
Amahemuhemu amasha athi iSamsung isika inani lamaphaneli we-OLED eyenzela i-iPhone X
Umbiko omusha, kulokhu ovela eBloomberg, uphinde wathi i-Samsung kuye kwadingeka inciphise ekwakhiweni kwamaphaneli we-OLED we-iPhone X
Umqondo wokuqala wokuthi i-iPhone X Plus ibukeka kanjani
Sikukhombisa ukunikezwa kwevidiyo yokuqala, yokuthi ingaqhathaniswa kanjani ne-iPhone X yamanje, i-iPhone X Plus elandelayo, uma ekugcineni yethulwa emakethe ngokolwazi olushicilelwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule yiBloomberg.
Notch noma cha notch?
Ngemuva kokwethulwa kwe-iPhone X yi-Apple, bonke abanye abakhiqizi kuye kwadingeka banqume ukuthi bayayisebenzisa noma cha inothi, ngezinzuzo zayo kanye nobubi bayo.
I-Apple izokwethula ama-iPhones amathathu amasha kulo nyaka
I-Apple ihlela ukwethula izinhlobo ezintathu ze-iPhone kulo nyaka. Imodeli evuselelwe ye-iPhone X, imodeli enkudlwana futhi eshibhile.
I-Apple izobamba iqhaza engqungqutheleni yakwa-Israel Machine Vision njengomxhasi
U-Apple uzokhuluma engqungqutheleni yakwa-Israel Machine Vision. Inkulumo yakhe izobe isuselwa kwikhamera yangaphambili ye-iPhone X nokuthi ubuchwepheshe bayo busetshenziswa kanjani.
Ukuqhathanisa phakathi kwe-Samsung Galaxy S9 entsha, i-iPhone X, i-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus
Lapho nje i-Samsung Galaxy S9 isemthethweni, sikukhombisa ukuqhathanisa lapho singabona khona yonke imininingwane ye-Galaxy S9 ne-Galaxy S9 + ne-iPhone X, i-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus
Le yindlela i-Apple eyithole ngayo imiphumela ekusebenzeni kwe-'Portrait Lighting 'ye-iPhone X
I-Apple ingeza ividiyo entsha esiteshini sayo se-YouTube. Futhi wenza kanjalo ngokuchazela umsebenzisi ukuthi uwuthole kanjani umsebenzi we-'Portrait Lighting 'we-iPhone X
I-iPhone SE 2 ibizobiza kakhulu kunemodeli yamanje, ngokusho kwamahemuhemu
Amahemuhemu mayelana ne-iPhone SE 2 avela futhi, enye yezinguqulo ezilindelwe kakhulu kulo nyaka we-2018. Kulokhu, intengo yokuqala kungenzeka ivezwe
Lo ngomunye umqondo we-iPhone SE 2 ngomklamo we-iPhone X
Manje sonke silinde i-Apple ukuthi yethule wonke amadivayisi asazofika ekwakhiweni kwe ...
AbakwaSamsung banamaphaneli we-OLED ngokweqile ngenxa yesidingo esiphansi se-iPhone X, ngokusho kukaNikkei
INikkei Asian Review ibuya namahlebezi okuthi i-iPhone X ayithengisi njengoba bekulindelwe. Futhi lokhu kube nomthelela ku-Samsung nakumaphaneli ayo we-OLED
I-Strategy Analytics Ithi i-Apple Yenze Imali Eningi Ikota Yokugcina Kunazo Zonke Ezinye Izinkampani Ndawonye
Isidingo esinamandla samamodeli amasha we-iPhone X asuka ku-Apple azuzwe ngekota yokugcina futhi kusukela lapho ...
I-iPhone elandelayo engu-6.1-intshi kulindeleke ukuthi ithengise njengama-hotcake
Ithuba lokuthi i-Apple izokwethula imodeli entsha ye-iPhone engu-6.4-intshi, i-iPhone Plus entsha ezofika ngo-2018, izwakala kakhulu futhi kakhulu.
I-Apple ishintsha amamodeli we-16Gb we-iPhone 5c ngamamodeli we-32Gb
I-Apple ibizothumela ukugunyazwa kuzo zonke izikhungo zayo zokulungisa ukuthi zishintshe noma iyiphi i-5Gb iPhone 16c abayitholayo ngamamodeli aphezulu we-32Gb.
I-NYPD iqala ukwamukela i-iPhone 7 ne-7 Plus yokuqala
UMnyango Wamaphoyisa waseNew York usuqalile ukushintsha iWindows Phone Nokia ephelelwe yisikhathi ye-iPhone 7 ne-7 Plus.
I-Apple iqala ukuthengisa i-iPhone 7 ne-7 Plus esigabeni sayo esenziwe kabusha
Futhi imishini ye-Apple ayimi futhi izinsukwana ezihlala e ...
Kukhulisa inani labasebenzisi abahlangabezana nezinkinga nge-iPhone X lapho bethola izingcingo
Inkinga entsha ebhekene ne-iPhone X ihlobene nesikrini, isikrini esingavuli lapho abasebenzisi bethola izingcingo ezibavimba ukuthi bakwazi ukuziphendula.
I-Apple izolungisa i-iPhone 7 ngokwehluleka kokumboza mahhala
Ngo-2016 kutholakale izinkinga kuma-iPhone 7s athile ngemuva kokubeka imodi yendiza. Ukufakwa akuzange kuvele futhi. I-Apple ixazulula le nkinga eminyakeni emibili kamuva
I-iOS 11.3 ekugcineni izovumela ukuqinisekisa ukuthenga komndeni nge-Face ID
Uhlobo lokugcina lwe-iOS 11.3, ekugcineni luzovumela ukusetshenziswa kwe-Face ID ukugunyaza ukuthengwa kokuthengiwe okwenziwe ngomsebenzi woMndeni.
I-Apple igubha iRio Carnival ngevidiyo entsha ekhuthaza i-iPhone X
Abafana baseCupertino baphinde babonwa ngokukhuthaza imodi entsha ye-portrait ye-iPhone X ngesikhathi seRio Carnival.
I-Apple iyamangala ku-Grammy gala enekaraoke emibili e-animated ka-Animojis
Abafana baseCupertino babonakala kahle ngesikhathi seGrammy Awards ngamabala amabili amasha we-karaoke abalingisa i-Animoji edumile.
I-iPhone elandelayo enesikrini se-LCD izoba nokulungiswa okuphezulu kunokujwayelekile
Amahemuhemu aqhubeka mayelana nemodeli ye-iPhone yesikrini engu-6,1-intshi ezosebenzisa iphaneli ye-LCD esikhundleni se-OLED. Ngokusobala izoba nokuxazululwa okuphezulu kunokujwayelekile
Imiqondo yokuqala ye-iPhone XI iqala ukuvela
Idivayisi elandelayo ku-apula ingabizwa nge-iPhone XI, idivaysi ye-SIM ekabili enokwanda kwesikrini ngokunciphisa ama-bezels kanye notch.
Izici eziphezulu ezi-5 ezinhle kakhulu ze-iPhone X
Uma ungakaqiniseki ukuthi i-iPhone X iyona ukuphela oyifunayo, khona-ke sizokukhombisa ukuthi iziphi ezinezici ezi-5 ezihamba phambili ze-iPhone X
UTim Cook uyamangala futhi wethula inkulumo yakhe eDuke University nge-Animoji
UTim Cook ulandela ezinyathelweni zikaSteve Jobs futhi uzobamba iqhaza ekuthwesweni iziqu kweDuke University, futhi okuhle kakhulu ukuthi isimemezelo senziwe ngokuba yi-Animoji.
Isimemezelo sakamuva se-iPhone X sigxile kuzinketho esisinikeza zona ukuthatha ama-selfies
Esimemezelweni sakamuva se-Apple, siphakamisa imodi ye-selfie ye-iPhone X okweshumi nanhlanu, singawezwa amagama angemuva kaMuhammad Ali.
I-iPhone 8 ithengise kangcono kune-iPhone X kwikota yokugcina yonyaka
Ucwaningo luveza ukuthi e-United States i-iPhone 8 ithengise ngokuphindwe kabili kune-iPhone X, ngamamodeli amadala asathengiswa ngezinga elihle.
I-Apple ingaqala ukufaka esikhundleni se-iPhone 6 Plus enephutha nge-iPhone 6s Plus
Abafana baseCupertino bathumela umhlahlandlela kubahlinzeki babo ukuze kuthi kusuka ngoMashi baphinde basebenzise i-iPhone 6 Plus engaphelele ngemodeli ye-iPhone 6s Plus.
I-iPhone 7 Plus ibe yi-smartphone yesibili ethandwa kakhulu eChina phakathi kuka-2017
Imakethe yaseChina ingenye ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi inkampani yezobuchwepheshe ebiza usawoti wayo. I-Apple yenze kahle, kanti phakathi no-2017 ingesinye sezithengwa kakhulu
I-Apple ishicilela ividiyo entsha egqamisa imodi ye-portrait ye-iPhone X
U-Apple uthumele ividiyo entsha esiteshini sayo se-YouTube lapho igqamisa khona, futhi, izimfanelo ezinikezwa yimodi ye-portrait ye-iPhone X
INoa N10, enye i-smartphone yaseChina ejoyina imoto "notch"
Futhi kungenxa yokuthi kuyiqiniso ukuthi akubona bonke abakhiqizi bamadivayisi eselula base China abengeza izici zokuklama ...
Ngabe ucabanga ukuthi i-Face ID isebenza kahle kakhulu? AbakwaTrendForce bathi isenendawo enkulu yokwenza ngcono
Inkampani yezobuchwepheshe iTrendForce, ingenye yalezo ezixwayisa ngokuthuthuka okukhulu kwe-ID ka-Apple yalokhu ...
Yisiphi isikrini esivutha ngaphambili, i-iPhone X noma i-Samsung Galaxy Note 8?
Kunemibono eminingi yethulwa enetheni mayelana nokuthi kungenzeka ukuthi isikrini se-iPhone ...
I-LG izoba ngumenzi wesikrini se-OLED se-iPhone X Plus elandelayo
U-2018 kuzoba unyaka we-iPhone X Plus entsha futhi konke kubonakala kukhombisa ukuthi i-LG izoba ngumenzi wesikrini esisha esikhulu se-OLED se-Apple Plus elandelayo.
USatechi usinikeza isisekelo sokushaja esingenantambo se-premium ngentengo enhle
USatechi usinikeza isisekelo sokushaja esingenantambo ngomklamo omuhle nangezinto ezisezingeni lokuqala njenge-aluminium. Futhi iyahambisana nokushaja okusheshayo kwe-iPhone X, 8 ne-8 Plus.
Ungazivala kanjani izinhlelo zokusebenza ku-iPhone X
I-iPhone X yethula ukuthinta okusha kwezinhlelo eziningi nokwenza izicelo. Sikutshela ukuthi isebenza kanjani nokuthi kufanele siyisebenzise kanjani ukuthuthukisa ukusebenza kwedivayisi yethu.
Isizukulwane sesibili se-iPhone SE singafika ngaphambi kweWWDC 2018
Isizukulwane sesibili se-iPhone SE singafinyelela emakethe ngaso sonke isigamu sokuqala sika-2018, ngomklamo ofanayo kepha i-hardware okwamanje etholakala ku-iPhone 8
I-iPhone X ishibhile kancane ngo-2018?
Cha, asidlali enye yamahlaya ejwayelekile ebesingawafunda izolo ngoDisemba 28, sibhekene ...
I-iPhone X ingakuguqula ngokoqobo ube yindoda engabonakali
Ungacabangani uma singakutshela ukuthi i-iPhone X ingakwenza ungabonakali? Yebo, yilokhu onjiniyela baseJapane abakuzuzile futhi bakubonisa kuvidiyo
Ungasithatha kanjani isithombe-skrini nge-iPhone X
Isifundo sokuthatha izithombe-skrini ku-iPhone X. Ibhukwana elilula ngesinyathelo ngasinye ukwenza lo msebenzi olula kodwa obalulekile. Sikufundisa nokuthi uhlela kanjani izithombe-skrini, ukuthi ungabelana kanjani ngazo nezinye izinto. Uma ungazi ukuthi ungasithatha kanjani isithombe-skrini ku-iPhone X, lapha sikukhombisa ukuthi kanjani !!
Landa amaphephadonga ngokuklanywa kwesikrini se-iPhone X entsha
Enza ngendlela oyifisayo, futhi ubonise i-iPhone X yakho entsha ngamaphephadonga we-Blueprints ngokuklanywa kwesikrini se-iPhone X
Awukwazi ukugunyaza ukuthenga kwengane yakho nge-Face ID
Lokhu yinto engiyibonile njengoba ngisebenzisa i-iPhone X, kepha lokho ...
Uhlelo oluhle kakhulu lokuqiniswa kwe-smartphone ku-Galaxy Note 8
Uhlelo oluhle kakhulu lokuqiniswa kwe-optical ku-smartphone, singaluthola kwi-Galaxy Note 8
Thola ukuthi ungalanda kanjani futhi uthenge izinhlelo zokusebenza nge-iPhone X. Ngenxa yokungabikho kwenkinobho yasekhaya kwi-iPhone X entsha, izinhlelo zokusebenza azisalandwa njengakuqala. Thola yonke imininingwane!
Bamangalela i-Apple ngokunciphisa ijubane amadivayisi anamabhethri amadala
Amaqembu abasebenzisi base-US amangalela i-Apple ngezinkinga ezibangelwa amabhethri kumadivayisi amadala.
I-iPhone X ibizosheshisa ushintsho lwamadivayisi eselula eChina
I-iPhone X entsha kungenzeka isolwe ngabaningi ababuyekeza i-iPhone yabo yakudala ngaphambi kwesikhathi, ngisho nabanye abasuka ku-Android baya ku-iOS.
UFlickr uqokomisa ukusetshenziswa kwe-iPhone ekuhlanganisweni kwayo kwango-2017
Ipulatifomu eyaziwayo yokwabelana ngezithombe nezithombe iFlickr, ishicilela njengoba unyaka nonyaka iphetha isifinyezo esincane samadivayisi ...
I-Face ID ibhekene nokuqashelwa ebusweni kusuka kwamanye amadivayisi
Sinezinyanga ezimbalwa nge-iPhone X entsha etholakalayo futhi ngaphandle kokungabaza omunye wemisebenzi engeziwe ...
Izikhathi zokuthumela ze-iPhone X ziyaqhubeka ukwehla kwamanye amazwe
I-iPhone X iyaqhubeka nokubona izikhathi zokulethwa zincishisiwe kwamanye amazwe, zize zitholakalele ukuthunyelwa ...
I-iPhone X ka-2018 izoba nokuzimela okukhulu ngenxa yebhethri elisha ku-'L '
I-iPhone X 2018 izoba nebhethri eningi, ngokusho kwamahemuhemu wakamuva. I-Apple izobheja ekwakhiweni kwebhethri okusha okuzosebenzisa amandla amaningi
I-iPhone X manje isingathengwa mahhala futhi ngaphandle kwe-SIM e-US
Futhi ukuthi e-United States awukwazanga ukuthenga amadivayisi njengoba senza lapha eYurophu, mahhala ngokuphelele….
I-Google ivuselela uhlelo lokusebenza lwe-Gmail ukusekela i-iPhone X
Abafana bakwaGoogle ekugcineni bavuselela uhlelo lokusebenza lwe-Gmail ukuxhasa isikrini esisha se-iPhone X ngaphezu kokungeza ukusekelwa kwama-akhawunti we-IMAP.
Izikhathi zokuthumela ze-IPhone X zehlela ezinsukwini ezi-5
Kancane kancane kubonakala sengathi bonke abasebenzisi ababefuna ukuthenga i-iPhone X entsha sebenayo vele ku ...
I-Google ivuselela i-Google Amamephu ukuyivumelanisa ne-iPhone X
Abafana bakwaGoogle bavuselela ukwakheka kohlelo lokusebenza lweGoogle Maps ukuvumelanisa uhlelo lokusebenza kusikrini esisha esikhulu se-iPhone X.
Izicelo ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe nge-iPhone X
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezinhle ongazithatha nokuhlela izithombe nge-iPhone yethu
Benza imaski entsha yokugwema i-Face ID ye-iPhone X
Futhi ngukuthi abanye basazimisele ukuthi ukuphepha kwenzwa entsha ye-iPhone X Face ID kulula ...
I-Apple yethula izikhangiso ezi-4 ezintsha nge-Face ID kanye ne-animojis njengabaphikisi
I-Apple ikhiphe amavidiyo ama-4 amasha ahlobene ne-iPhone X futhi ikakhulukazi i-Face ID nokusebenza kwayo ezimweni ezahlukahlukene zemvelo.
Landa wonke amaphephadonga wangempela we-Apple aguqulelwe i-iPhone X
Thola amaphephadonga wezinganekwane wezinguqulo ezindala ze-iOS eziguqulwe ngokuphelele kuzikrini ezintsha ze-iPhone X.
U-Oppo R13, abakhiqizi baseChina nabo bafuna i-iPhone X
Abakhiqizi baseChina baqala ukubhekisa kukho konke okuhle nokubi komklamo we-iPhone X wama-smartphones abo amasha.
Ikhamera ye-iPhone X idinga ukukhanya okuncane ukuthatha izithombe ezinhle
Ukuhlolwa kwekhamera kwenziwa ngazo zonke izinhlobo ku-iPhone futhi kuncane noma akukho okuphunyukayo ...
I-iPhone X isivele ikhona kwamanye amazwe ayi-13
Imodeli yakamuva sha sha yeselula yakwa-Apple, i-iPhone X eyinguquko, ingene ngokusemthethweni emazweni ayishumi nantathu kulo Lwesihlanu, lwesi-24.
IBlack Friday nayo iza kuma-iPhones ngezaphulelo ezinkulu
I-Amazon isinikeza ama-iPhones amasha ngamanani aphansi kakhulu kunasesitolo esisemthethweni kuphela phakathi namahora angama-24 ka-Black Friday
Isikhathi Esilinganiselwe Sokuthumela se-IPhone X Siyaqhubeka Silahla
Isikhathi sokuthumela se-iPhone X sincishiswe kakhulu futhi njengamanje sisethwe kumaviki awu-1 kuye kwayi-2
Amahemuhemu avela kunethiwekhi mayelana nokuqala kokukhiqizwa kwe-iPhone SE 2
Ngeke sisho ukuthi lesi yisikhathi sokuqala lapho sibona kuvela amahemuhemu mayelana nokwethulwa noma ukuqala kwe ...
Ubuwazi ukuthi i-Face ID ithulisa izingcingo futhi yehlise ithoni ye-alamu ngokubheka nje i-iPhone?
Lona ngomunye waleyo misebenzi i-iPhone X entsha nesimangazayo esinikeza yona nokuthi njengoba kwenzeka ku ...
Umkhawulo we-Apple wePortrait Lighting
Izithombe ezindala ezivela kumodi ye-iPhone camera portrait azikwazi ukuthuthukiswa kusetshenziswa imiphumela emisha yokukhanyisa ye-iPhone x.
Izikrini ze-FullVision, imfashini noma ukusebenziseka? Lokhu kubukeka kanjani i-iPhone SE-X
Ngabe isikrini se-FullVision siyasebenza ngempela noma siyimfashini? Noma kunjalo, konke kukhombisa ukuthi imakethe izolandela le ndlela. Lokhu kungabukeka kanjani i-iPhone SE-X
Thatha ithuba lokunikezwa nguYoigo ngoLwesihlanu Omnyama ukuthola i-iPhone X
U-Yoigo usilungiselele isipho esikhetheke kakhulu ukuthi sikwazi ukuthola izinsuku ezingama-iPhone X ngaphambi komgubho we-Black Friday
I-iPhone X ibe ushintsho olukhulu selokhu i-Apple yethule imodeli yokuqala ye-smartphone edume kakhulu ye ...
I-iPhone X iqeda ukubhuka ngemizuzu emi-3 endaweni yakwa-Samsung
Ngeke sithi impumelelo etholwe yi-Apple iPhone X entsha yinto yesikhashana, ngoba lapho ...
I-iPhone X ibheke enye yezinto ezinhle kakhulu ezisungulwe ngonyaka ka-2017 ngokusho kukamagazini i-TIME
Umagazini iTime ubheke i-iPhone X njengenye yezinto ezinhle kakhulu ezisungulwe onyakeni esesizophela ngazo.
I-Apple ivala amabanga ngokusetshenziswa kwe-Animoji kumamodeli we-iPhone amadala
Futhi ukuthi kuleli sonto kufike izindaba kunethiwekhi mayelana nokusebenza kwekhamera ye-TrueDepth ye ...
UTotallee ukhombisa iqoqo lakhe elisha lamacala we-iPhone X
I-iPhone X ingabukeka inhle ngalawa macala amasha avela kuTotallee, isiqalo saseCalifornia esinamaqoqo amasha wamacala aso amancane kakhulu.
Isikhathi sokuthumela sehla nge-iPhone X futhi
Ngalesi sikhathi izikhathi zokuthumela zemodeli entsha ye-iPhone X ziyehla futhi kulokhu ...
Umfana oneminyaka eyishumi uvule i-iPhone X kanina ngokuhlekisa ngoFace ID
Izindaba zibonakala ziyiqiniso ngokuphelele futhi ukuthi umama uqopha nendodana yakhe eneminyaka eyishumi ukulandelana okuthi ...
Uma ungunjiniyela, ungahle ube nentshisekelo kula maqhinga i-Apple engeza ku-WebKit
Kubukeka sengathi izindaba ze-iOS 11.2 ziyaqhubeka nokukhombisa imininingwane ethokozisayo futhi kulokhu zihlobene nabathuthukisi….
I-Xtorm Freedom ishaja ngokushesha i-wireless base, ye-iPhone 8, 8 Plus ne-X yakho
IXtorm Freedom isinikeza isisekelo sokushaja okungenantambo esihambisana nokushaja okusheshayo kwe-Apple kwe-iPhone 8, 8 Plus ne-X yethu
I-Apple ivuma uhlelo lokusebenza lwe- "Notch Remover" lwe-iPhone X
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu maqondana nobuhle be-iPhone X ngokungangabazeki i-Notch esingakwazi ...
Ungasenza kanjani ikhava yangemuva ye-iPhone X esobala ngokuphelele
Iqiniso ukuthi inqubo ethile enzima ukuyenza nokuthi isivele ilungile futhi ...
I-Apple izobeka phansi isikhundla sayo i-Samsung ngenxa yokuthuthuka okuzonikezwa yi-iPhone X
I-Apple izokhipha isihlalo sobukhosi i-Samsung njengomenzi womakhalekhukhwini omkhulu kunabo bonke emhlabeni ngenxa yokuthuthuka ezokuthola ekuthengisweni kwe-iPhone X.
Lokhu ukwehluleka okuvame kakhulu kwe-iPhone X
Sizobuyekeza amaphutha namaphutha ajwayelekile kakhulu esingawathola kumayunithi we-iPhone X angalungile.
I-iPhone X ayikuthandi ukubanda, sethula i- «Coldgate»
Abanye abasebenzisi be-iPhone X bayayeka ukusebenza lapho bevezwa amazinga okushisa aphansi, isiphazamisi i-Apple esivele isazi futhi esizoyilungisa kungekudala
I-iPhone X inezipika ezingcono kune-iPhone 8 Plus
Futhi ukuthi uma i-iPhone ithuthukile ezikhathini zamuva, ngokungangabazeki umsindo. Kancane ku…
Bhekana nekhamera ye-iPhone X ngekhamera yePanasonic Lumix GH5
Akungabazeki ukuthi ikhamera yohlobo olusha lwe-iPhone X iyamangalisa, njengoba injalo entsha ...
I-Apple isanda kumemezela ukutholakala kwe-iPhone X emazweni amasha ayi-14, ngaleyo ndlela yandisa ukutholakala kokufanayo cishe kuwo wonke umhlaba.
I- "notch" ye-iPhone X entsha ngokungangabazeki iyinto engenakugwenywa njengoba ihlala ...
Kubiza i-Apple ukwenza i-iPhone X ibe ngaphansi kuka- € 350
Abahlaziyi bacabanga ukuthi kubiza inkampani yaseCupertino ngaphansi kuka- € 350 ukwenza i-iPhone X ngayinye abazoyibonisa kamuva okungenani i- € 1.159.
Ukuhlolwa kwejubane phakathi kwe-iPhone X ne-Galaxy Note 8
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kudedelwe ividiyo lapho singabona khona isivivinyo "sejubane langempela" ku ...
I-Animoji njengohlelo lokusebenza lwemilayezo ezimele
Ungathanda ukusebenzisa i-Animoji enikezwa yi-Apple kuMilayezo ngokuzimela? Yebo, umakhi ukwazile ukwenza uhlelo lokusebenza ...
I-iPhone X yi-iPhone elula ukwedlula yonke emlandweni
Ngokusobala, nge-iPhone X sibhekene ne-iPhone ebucayi kunazo zonke ezake zenziwa yinkampani yeCupertino.
I-iPhone X inesikrini esihle kakhulu futhi esithuthuke kakhulu emakethe
I-DisplayMate ihlaziye isikrini se-iPhone X futhi yaphetha ngokuthi iyisikrini esihle kunazo zonke esake sazama, iza ukusilinganisela njengesiphelele.
I-iPhone X ifinyelela amaphuzu amahle kakhulu ezithombe ngokusho kwe-DxOMark
I-iPhone X ifinyelela amaphuzu amahle kakhulu ezithombeni ezitholwe yinoma iyiphi i-smartphone, noma kungenjalo esigabeni sevidiyo.
Izithombe zokwethulwa kwe-iPhone X zibonwa ku-Apple uqobo
Vele, ukwethulwa kwezinhlobo ezintsha ze-iPhone X kwatholwa ngamandla ngoNovemba 3 ...
AbakwaSamsung baziqhayisa ngobuhle bamatheminali abo uma kuqhathaniswa ne-iPhone
AmaKorea akwaSamsung afake kwiwebhusayithi yawo ye-YouTube ividiyo entsha lapho asikhombisa khona impilo yomsebenzisi kusuka kwi-iPhone yokuqala
I-iFixit inika i-iPhone X i-6 kwayi-10 yokulungiswa
Izinsizwa ezise-iFixit seziyihlukanisile i-iPhone X ukuhlaziya ubunzima bayo uma kukhulunywa ngokulungiswa uma kungenzeka kubhidlike.
Ingabe i-iPhone X iyagoba?
Kuvidiyo esikukhombisa yona kule ndatshana, asikwazi ukubheka hhayi kuphela uma i-iPhone X igobile, kodwa nokuthi imelana kanjani nemikrwelo.
I-Apple inikeza amathuba amaningi wokuqoqa kusuka ku-Apple Store kuwebhusayithi yayo
Ku-Apple Store Online sizokwazi ukuthola ukuthi yiziphi ezinye izitolo eziseduze ezinikezela ngezinsuku ezifanayo zokulethwa ukuze sikwazi ukuthatha i-iPhone X yethu
I-Animoji Karaoke ihlasela i-intanethi
Ngemuva kokwethulwa kwe-iPhone X, abakwa-Animoji sebengabaphikisi abakhulu bamavidiyo ngokudlala kwanoma iyiphi ingoma ongayicabanga.
Funda ukuthi uyisebenzisa kanjani i-iPhone X entsha ngohambo oluqondisiwe luka-Apple
I-Apple yethula ividiyo entsha echaza ukusebenza kwe-iPhone X ukuze sikwazi ukuthola ukusebenza okusha kwedivayisi.
I-Apple ikhipha i-beta yesibili ye-iOS 11.2 ye-iPhone X
I-Apple ikhiphe i-beta yesibili ye-iOS 11.2 ehambisana ne-iPhone X, ukuze abasebenzisi bakwazi ukubuyisela ikhophi le-iPhone yabo yakudala entsha.
Sihlaziya i-iPhone X, ifoni ezokhomba inkathi ethile
Amayunithi okuqala asevele esemakethe, sikunikeza ukuhlaziywa okuhle kwe-iPhone X, i-terminal eyenzelwe ukushintsha umlando we-telephony.
Bantshontsha i-iPhone X engu-300 lapho bezothunyelwa esitolo se-Apple
Amadoda amathathu afake izigqoko atshontshe ama-iPhone Xs angaphezu kwama-300 elolini lokulethwa kwe-UPS obekuhlelelwe ukuwaletha esitolo se-Apple.
Ukonakala kwe-iPhone X kusimangaza ngebhethri eliphindwe kabili ngaphakathi
Kulokhu bekungekhona ukuwohloka okusemthethweni okwenziwe yi-iFixit, kepha kusadalula lokho. Njengawo wonke umuntu ...
I-iPhone X yayihlelelwe ukungena emakethe ngo-2018
Izinhlelo ze-Apple ze-iPhone X bekuzokwethula le modeli ngesikrini esingenasici ngo-2018, kepha bebefuna ukuthuthukisa ukwethulwa kwayo ngonyaka.
I-iPhone X 64 GB 200 euros ishibhile ngenxa kaJoigo
Uma ungazange nje uthathe isinqumo sokuthenga i-iPhone X, ngoba yeqa isithiyo esingokwengqondo sama-euro angama-1000, mhlawumbe okunikezwayo kukaYoigo kuzokukwenza ufune.
Imigqa emikhulu ibuyiselwe i-iPhone X
Olayini bakhona futhi phambi kwama-Apple Stores emhlabeni jikelele ngaphambi kokwethulwa kwe-iPhone X okuseduze
Ukuthunyelwa kwe-IPhone X kwehlisiwe kwaba amaviki ama-3-4
Futhi akunakuba ukuthi ihlale isikhathi eside ngalezi zinsuku ezingama-5-6 zesikhathi sokulethwa nokuthi nini ...
"Reflection", leli igama leringithoni ekhethekile ye-iPhone X
Into ebalulekile lapha ukuthi i-Apple ingeze iringithoni ekhethekile ye-iPhone X ebizwa nge-Reflection, sizokukhombisa.
I-IPhone X Izindleko Eziphansi Zingahle Zingabi Nangemuva Kweqiniso Ikhamera ye-3D
Ukonga izindleko, i-Apple izosusa ikhamera ye-iPhone X ebiza ngamanani aphansi ngenxa yezinye izici.
U-Apple uthi ayikaze isebenze ku-in-display sensor zeminwe
Ngemuva kwamahemuhemu amaningi, iqiniso ukuthi akazange asebenze ekusetshenzisweni kohlelo lokufunda ngeminwe oluhlanganiswe esikrinini.
USteven Levy, ongomunye wabokuqala ukuhlola i-iPhone yangempela, ukhuluma nge-iPhone X
I-iPhone X isizothengiswa kanti izibuyekezo zokuqala zizovela enetheni. Esinye sezibuyekezo senziwe nguSteven Levy.
Ngabe i-ID ye-iPhone X's Face ID izoludlulisa uvivinyo lwamawele? Lapha sishiya ividiyo yangempela
Lona ngomunye wemibuzo ebuzwe ngaphezu komunye wethu ngenkathi bethula imodeli entsha ye ...
I-iPhone X inokutholakala futhi isebenza ngokuthinta komzimba
I-iPhone X inomsebenzi wokuFinyeleleka njengoba sibonile ngemuva kokubuyekezwa kokuqala okushicilelwe nedivayisi entsha
I-iPhone X izofihla okuqukethwe kwezaziso ngokuzenzakalela, nawe ungakwenza.
Inketho yobumfihlo esivele ikhona kepha bambalwa abazi ukuthi izokwenziwa isebenze ngokuzenzakalela ku-iPhone X futhi ayizukuvumela muntu ukubona izaziso zethu
ICanalys Ithi Ukuthengiswa Kwe-iPhone 8 EChina Kukhulisa Leli Khota
Futhi ukuthi i-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus banembangi ebekwe yi-Apple uqobo, ...
I-Apple ivimba ukusebenza kwe-iPhone X ngenxa yokwanda kwamavidiyo lapho kukhonjiswa khona isebenza
Kubukeka sengathi i-Apple iyakhathala ngokuvuza okuqhubekayo kwamavidiyo nezithombe ze-iPhone X futhi ivimbe ukwenziwa kokusebenza kwayo ize ifike emakethe
I-iPhone yangonyaka ozayo izosebenzisa inzwa ye-Face ID efanayo ne-iPhone X
Ngeke sisibone isizukulwane esilandelayo se-Face ID ngonyaka ozayo, ngokusho komhlaziyi uMing-Chi Kuo, ngakho-ke kuzofanele silinde okungenani kuze kube ngu-2019
Isitoko se-iPhone X sesivele sisezitolo, izithombe zokuqala
Sizobheka ukufakwa kwe-iPhone X nalezi zingxenye zokuqala esizokwazi ukuzibona ezitolo kokubili ebhokisini nangaphandle.
Unjiniyela we-Apple imililo ondodakazi yakhe ibukise nge-iPhone X ngenkathi ivakashele ubaba
Ngosuku olufanayo lapho ividiyo efakwe yindodakazi yonjiniyela we-Apple, okurekhodwe, ngokwengxenye, e-Apple Campus, yasabalala, waxosha unjiniyela.
I-Apple iqhubekisela phambili izinsuku zokulethwa kwe-iPhone X
Izolo, uLwesihlanu, Novemba 27, ukubhuka kwe-iPhone X kuqale, ifoni entsha ye-Apple, futhi njengabo bonke ...
Ishaja yedeskithophu ye-Dodocool ene-QI, enye yezindlela ezingcono kakhulu ze-iPhone yakho entsha
Sivivinye ishaja entsha yedeskithophu iDodocool ngeQI, ishaja entsha yanoma ngubani ofuna ukushaja okungenantambo ku-iPhone 8 naku-iPhone X.
UBelkin usevele unabavikeli besikrini abathengiswayo esitolo se-Apple
Kuwebhusayithi ye-Apple sesivele sine-iPhone X entsha esizoyigcina futhi ngaphezu kwalokhu bayangezwa ...
I-Apple Ithi Isidingo Se-iPhone Xs Ngaphezulu Kokulindele
Izitatimende zokuqala ze-Apple maqondana nokuqala kokubhuka kwe-iPhone X entsha kuzoba ngaphezulu kakhulu ngisho ...
Izinkulungwane zokubhuka kwe-iPhone X zisho ukuthi ukuthunyelwa manje sekungamasonto ama-5-6
Akungabazeki ukuthi lokhu kuqala kokubhuka kwemodeli entsha ye-iPhone X kudlule ezigabeni eziningana phakathi kwezinkulungwane ze ...
Ngabe i-iPhone X izoshisa isikrini njengeGoogle Pixel 2?
Ngabe i-iPhone X izoshisa isikrini njengeGoogle Pixel 2? Umbuzo abathengi besikhathi esizayo abaqala ukuzibuza wona.
Sivivinye ishaja yemoto engenantambo yakwaDodocool
Sethula enye yezindlela ezingcono kakhulu zokushaja i-iPhone X yethu entsha noma i-iPhone 8, ishaja yemoto engenantambo iDodocool.
I-Apple iphendula iBloomberg: kungamanga ukuthi ukuthembeka kwe-Face ID kwehlile
Ngaphambi kwezinsolo ezinkulu zikaBloomberg, i-Apple iphendule ngokuphika ngokusobala ukuthi yehlise ukuthembeka kwe-ID yayo yobuso
Umbiko weBloomberg uthi i-Apple inciphisa ukunemba kwe-Face ID
Lesi sitatimende asiqhathaniswa ngokusemthethweni ne-Apple uqobo futhi inkampani ayiphawuli ku ...
Ividiyo yesenzo sokuswayipha ukushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza ku-iPhone X
Futhi kungukuthi ngemuva kokubona ukuthi abanye abasebenzi be-Apple nemindeni yabo babengasenqunyiwe ekuboniseni ...
Amavidiyo amabili amasha we-Apple akhombisa imodi ye-portrait ye-iPhone 8 Plus
I-Apple isanda kufaka ohlwini lwamavidiyo esiteshini sayo se-YouTube, amavidiyo amabili amasha lapho ...
Futhi manje u-Apple uyeza asitshele ukuthi bazoba nesitoko se-iPhone X ngoNovemba 3
Lapho yonke into isiphendukela futhi abahlaziyi babikezela ukushoda komkhiqizo ngosuku lokuqalisa / ukubhuka kwe ...
Amashaja e-Qi Wireless ahlanganiswe yimikhiqizo yezimoto ahambelana ne-iPhone 8
Futhi kungenxa yokuthi lobu buchwepheshe bokushaja kokungeniswa ezimotweni zamanje zezinye izinhlobo zitholakalele ...
UBrooke Amelia Peterson, i-youtuber isibonisa i-iPhone X evela ngaphakathi kwe-Apple Campus
[Sihlela ukwengeza ividiyo ephelele futhi] Lezi zindaba zikubonga ngoba usazisile ngo ...
Ucwaningo luveza ukuthi ukuthengiswa kwe-iPhone 8 kungaphansi kwamamodeli we-iPhone S
Kulokhu sikhuluma ngombiko ovela ku-Consumer Intelligence Research Partners, i-CIRP. Yize kuliqiniso ukuthi sine ...
Ngemuva kweminyaka emithathu kwethulwe i-Apple Pay, sekuyisikhathi sokubamba iqhaza
Sikwazile ukusebenzisa i-Apple Pay kuma-iPhones ethu iminyaka emithathu, insizakalo ekukhuleni okugcwele nokuthi i-Apple ifuna ukuyibeka kuphi.
Ukuqhathaniswa kokumelana nokuwa phakathi kwe-iPhone 8 Plus neGoogle Pixel 2 XL
Kule vidiyo elandelayo, sikukhombisa ukuthi uma i-iPhone 8 Plus noma i-Google Pixel 2 XL imelana ngokwanele ukuba iwe
Isikrini sePixel 2 XL sithola inqwaba yokugxekwa
Isikrini sePixel 2 XL siveza okungahambi kahle ngemibala nokuphazamiseka okufanayo lapho kusibuka ezinhlangothini ezithile ezingathandi nhlobo.
Ividiyo entsha isikhombisa i-iPhone X emhlophe
Ividiyo yeReddit isibonisa i-White X X isebenza, ikwazi ukubona imininingwane yedizayini kanye nokusebenzisana kwayo bukhoma
U-Angela Ahrendts akafuni ukuphoqa ukuthengiswa kwe-iPhone X
Izinkomba zokuqala ezivela ku-Angela Ahrendts zifika ngendlela abasebenzi be-Apple okufanele baziphathe ngayo ne-iPhone X.
I-Apple ihlanganisa amazinyo ayo ngokukhiqizwa kwe-iPhone X
Isikhathi esibalulekile sokukhiqizwa kwamamodeli amasha we-Apple, i-iPhone X ezothengiswa ...
INAB igcizelela ukuthi i-Apple isebenzise amachips e-FM amadivayisi ayo
INational Association of Broadcasters (NAB) igcizelela ukuthi i-Apple kumele isebenzise i-chip ye-FM eyakhelwe kumadivayisi wayo we-iPhone 7 ne-iPhone 8.
Ukurekhodwa kwe-4K 60fps ku-iPhone 8 kunciphisa ikhwalithi yevidiyo
Abafana abavela ku-AppleInsider basikhombisa kuvidiyo ukuthi ikhwalithi yamavidiyo ku-4k kuma-fps angama-60 ingaphansi kwamavidiyo aqoshwe ku-4k kuma-fps angama-30
U-2018 uzoba unyaka omuhle we-iPhone futhi konke ngenxa ye-iPhone X
Futhi kungukuthi yize kungabonakala sengathi lo nyaka uzoba namandla kakhulu ekuthengisweni kwe-iPhone ye ...
Ukusatshalaliswa kwe-iPhone X kuma-Apple Stores kuqala njengoba umkhiqizo uqhubeka ukwanda
I-iPhone X entsha isiqalile ukufika kuma-Apple Stores okuqala ngenkathi ukukhiqizwa kukhuphuke kakhulu emasontweni adlule.
Thola ingaphakathi lawo wonke amamodeli we-iPhone ngenxa ye-infographic evela eBloomberg
Abafana abavela eBloomberg bavula isayithi nge-infographic exhumanayo lapho singabona khona yonke imininingwane yezingxenyekazi zekhompyutha yazo zonke izinhlobo ze-iPhone.
I-Apple isilungele ukusebenzisa i-Face ID kuwo wonke ama-iPhones wayo ngo-2018
Noma amahemuhemu ngezinkinga ezizobambezela ukukhiqizwa okukhulu kwe-iPhone X entsha, okuningi ...
I-iPhone X yokuqala isiqala ukubonakala emgwaqweni
Kumele kucaciswe ukuthi lolu hlobo lwezivivinyo lwenziwa ekwethulweni ngakunye futhi yize kunzima ukuzibona ...
I-Apple iqinisekisa ukuthi iyasebenza ukulungisa inkinga yokuFinyeleleka neSikhungo Sezaziso
Njengoba izinsuku zihamba, sibona ukuthi i-Apple izilungisa kanjani ezinye izimbungulu ezitholakale kusukela nge-beta yokuqala ye-iOS 11
Lokhu kuhumusha kukhombisa ukuthi i-iPhone X Plus engu-6,4-intshi ibukeka kanjani
Abanye abaklami benze ama-renders akhombisa ukuthi i-iPhone X ibizobukeka kanjani ngesikrini esingu-6,4-intshi esingabona ukukhanya ngonyaka olandelayo.
I-iPhone X idlulisa konke ukulawula kwe-FCC ukufinyelela emakethe
Umgwamanda olawula ezokuxhumana ngocingo e-United States, unikeze isiqiniseko sokuthi i-iPhone X ithengiswe ngaphandle kwezinkinga.
Sazi imininingwane eminingi mayelana ne-X X interface
Sazi eminye imininingwane yokuthi isibuko se-iPhone X sizobukeka kanjani nokuthi ezinye izici ezinjengesikrini sokukhiya noma isikhungo sokulawula zakhiwe kanjani kabusha.
Izimpondo ze-iPhone X, uhlobo lwayo olusha
Izimpondo ze-iPhone X zingundabuzekwayo nabasekeli nabadeleli ngokufanayo kodwa iqiniso ukuthi balapha ukuhlala
Ifilimu edutshulwe ngokuphelele ku-iPhone ithola ukuqokwa okungu-10 eTaipei Film Festival
I-movie ethi The Great Buddha, edutshulwe ku-iPhone 6 Plus, ithole ukuphakanyiswa kwe-10 Horse Horse ku-Taipei Film Festival.
I-Facebook iqala ngokuhlolwa kokuvula i-Face ID
I-iPhone X entsha izokwengeza ifomethi yokuvula ngokuthola ubuso bethu nalolu hlelo ...
I-iPhone X izonika iSamsung imali ethe xaxa kuneGalaxy S8 yayo
AbakwaSamsung bazokwenza imali eningi ngenxa yokukhiqiza kuphela isikrini se-Apple X ye-Apple, efinyelela ku- $ 110 ngeyunithi ngayinye
I-iPhone X izoba nomsebenzi wokuFinyeleleka
Kubukeka sengathi ukufinyeleleka noma umsebenzi wokufinyelela okulula uzoqhubeka ukubakhona ku-iPhone X yize kunokungabaza kokuqala ngakho.
I-Apple yethula i- "Portraits of Her", indawo entsha ekhombisa i-Portrait Lighting
I-Apple icela umculi weThe Shacks uShannon Wise ukukhuthaza i-iPhone 8 Plus Portrait Lighting entsha.
Splitgate, ngabe kukhona umuntu owacabanga ukuthi le iPhone 8 entsha ngeke ibe nesango layo?
Futhi yilokho, ngabe ukhona okholelwe ukuthi le iPhone 8 entsha ngeke ibe "nesango" layo? Lokhu kuyinto ngaphandle kokungabaza ...
I-iPhone X isivele inombiko wayo wezemvelo futhi ithola isilinganiso segolide ku-EPEAT
Okwamanje asikayitholi imodeli entsha ye-iPhone X, singayibeka nokugcina, kepha abafana baseCupertino sebevele ...
Ungawenza kanjani umsebenzi we-True Tone we-iPhone 8 entsha nge-iOS 11
Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-True Tone entsha yezikrini ze-iPhone 8 ngazo zonke izindlela: uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo nesikhungo sokulawula i-iOS 11.
I-Apple iqinisekisa ukuthi i-iPhone 8 inenkinga ngehedsethi
Mayelana nomsindo omile ezintweni ezisendlebeni ze-iPhone 8, inkampani yaseCupertino ivumile futhi sicabanga ukuthi ngeke kuthathe isikhathi eside ukuyixazulula.
Izinkinga zokukhiqiza ziyaqhubeka ku-iPhone X
Inkinga yeshumi nanye ejoyina ukwenziwa kwe-iPhone X iyona inzwa ye-3D eyichazayo, ethinta kakhulu isitoko sayo sokugcina.
UKoo, umhlaziyi weKGI uphuma evikela ukuthengiswa kwe-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus
Sisesikhathini esithandeka ngempela uma ubheka amahemuhemu ngokuthengiswa kwe-iPhone 8 ne-iPhone ...
Ukuphoqa ukuqala kabusha i-iPhone 8 kuya kuba nzima
Uyazi ukuthi ungakuphoqa kanjani ukuqala kabusha i-iPhone 8? Thola inhlanganisela entsha yezinkinobho okufanele uzicindezele ukuqala kabusha i-iPhone 8 yakho uma ikhiyiwe.
I-iPhone yakho manje ingaba nokushaja okungenantambo ngenxa yeMophie's Charge Force
Sihlaziya amacala kaMophie nezisekelo ezisivumela ukuthi sijabulele ukushaja okungenantambo kuma-iPhones angakusekeli
UTenaa uzoqinisekisa i-3GB ye-RAM ne-2.716mAh yebhethri le-iPhone X
I-iPhone X entsha inabasebenzisi abaningi abasalinde ukubhuka kanye nale modeli entsha ye ...
Amashaja ahambisana nokushaja okusheshayo i-iPhone 8, 8 Plus ne-X
Ukushaja okusheshayo kwe-iPhone entsha kungenzeka ngamashaja we-USB-C avela kwa-Apple neminye imikhiqizo esizokonga ngayo imali enhle
Ivolumu ye-iPhone 8 ne-iPhone 7 ubuso nobuso, ingabe ithuthukile?
Izipikha zestiriyo phakathi kwe-iPhone 8 zazithuthukise ama-25% kunangaphambili kwayo, i-iPhone 7. Lesi isivivinyo sokugcina.
UTim Cook ujabulile ngempendulo etholwa yi-iPhone 8
UTim Cook uya esitolo se-Apple ePalo Alto ngesikhathi kwethulwa i-iPhone 8 ne-Apple Watch nge-LTE, namazwana ngokwamukelwa okuhle abakutholayo.
Ukulungisa ingilazi yangemuva ye-iPhone 8 kubiza kakhulu kunesikrini
Kuzobiza malini ukulungisa ingilazi emuva kwe-iPhone 8? Ngokuya ngamanani asanda kuvuleka, kuzobiza kakhulu kunokulungisa isikrini.
Izizathu eziyisishiyagalombili zokufuna i-iPhone 8 entsha
I-Apple yethula izizathu zayo eziyi-8 zokuthi sithande i-iPhone 8 entsha, zonke izindaba zedivayisi entsha ye-Apple zihlangene endaweni eyodwa.
I-iPhone 8: ukubuyekezwa nokuhlaziywa kwevidiyo
Sivivinye i-iPhone 8 Plus entsha. Ingabe kuwufanele ngaphezu kwe-iPhone X? Thola izici zayo nokwakhiwa kabusha ngengilazi ngemuva.
Ingabe i-iPhone 8 entsha ine-2 noma i-3 GB ye-RAM? iFixit ikwenza kucace kithi ngeTeardown yayo
Azihluleki futhi imodeli ngayinye entsha ye-iPhone evela emakethe idlula etafuleni elisebenzayo le ...
Ungayiphathi kahle i-iPhone 8 entsha, ingaba kude kangakanani?
Sesinama "video wokuhlukumeza" wokuqala asezinhlotsheni ezintsha ze-iPhone 8 nalolu hlobo lwe ...
I-iPhone 8 Plus inekhamera yeselula ehamba phambili okwamanje
Ukuhlolwa okwenziwe yi-DxOMark kushiya i-iPhone 8 ne-8 Plus njengamakhamera weselula ahamba phambili emlandweni, edlula konke okunye.
Ungayisebenzisa kanjani ikholi ephuthumayo ku-iOS 11
Umsebenzi wokwenza izingcingo eziphuthumayo ku-iOS 11 usivumela ukuthi senze izingcingo kule nsizakalo ngaphandle kokuvula idivayisi.
Ukukhiqizwa okukhulu kwe-iPhone X akukakaqali
Ngaphandle kokungabaza, bonke abafuna ukuthola amamodeli amasha we-iPhone X kuzofanele balwe ...
I-iPhone 8 inamandla amakhulu, ngaphambi kwe-iPhone X
Ama-Benchmarks okuqala ayaphuma futhi impela i-iPhone 8 iyisikhungo esinamandla kunazo zonke ngokujwayelekile i-Apple eyethule futhi ezosungula ngo-2017.
I-iPhone 8 ne-iPhone X ayihambisani nebhendi yeT-Mobile ka-600 MHz
Okokuqala kufanele sicacise ukuthi lokhu kuyinto eyenzeka e-United States kuphela futhi nge ...
Bafethu, sesinayo i-unboxing yokuqala ye-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus
Yebo, umnqamulajuqu obekwe yi-Apple wokuletha le-iPhone 8 entsha awukafiki ngokusemthethweni futhi amanye asevele ...
Ukubuyela emuva ekuthengisweni kwe-iPhone 8, iphutha le-iPhone X?
I-iPhone 8 iyaqhubeka nokuhlinzekwa emazweni amaningi ukulethwa ngosuku lokuqalisa, konke okukhombisa ukuthi i-iPhone X ikuqandisa ukuthengisa kwayo.
Izizathu eziyisikhombisa ezizokwenza ufune ukuthenga i-iPhone X
Sifingqa lezo zici ezizokwenza uthandane ne-iPhone X futhi engayenza ithengwe ngaphezu kokuqinisekisiwe.
I-Apple yenza i-AppleCare + ibize kakhulu i-iPhone X ne-iPhone 8 Plus
Abafana abavela eCupertino bakhuphula amanani entengo yomshuwalense wabo omuhle kakhulu, i-AppleCare +, ye-iPhone X ne-iPhone 8 Plus entsha.
Abanye abahlaziyi bathi i-Apple izokwenza imali encane ngayo yonke i-iPhone X ethengisiwe
Ngokusho kwabanye abahlaziyi, inzuzo i-Apple ezoyenzela i-iPhone X ngayinye ethengisiwe izobe iphansi kunaleyo yamamodeli amadala.
UFederighi wembula imininingwane ebalulekile mayelana ne-Face ID
UFederighi ucacisa imiqondo ebalulekile mayelana ne-ID entsha yobuso, njengokuthi isebenza ngezibuko zelanga noma ubumfihlo bemininingwane yethu.
I-iPhone 8, 8 Plus ne-iPhone X yiwona wodwa ama-smartphones emhlabeni aqopha ngo-4k kuma-fps angama-60
Ama-smartphone kuphela angaqopha ngekhwalithi ye-4k kuma-fps angama-60 njengamanje asemakethe yi-iPhone 8, 8 Plus ne-iPhone X.
I-Face ID iyasebenza noma ngabe ugqoke izibuko zelanga
Isici esisha sokubukwa kobuso se-Apple ID sizosebenza nezibuko eziningi zelanga emakethe.
Hhayi eSpain, kepha e-US, ukuthunyelwa kwe-iPhone 8 ne-Apple Watch kuyanda
Onke amehlo agxile kumamodeli amasha we-iPhone akhishwe kuleli sonto futhi ngokusobala eyodwa ...
Ubuchwepheshe be-Face ID bukhawulela ukusetshenziswa kwe-iPhone X kumuntu oyedwa
Ubuchwepheshe bokuvula be-iPhone X buvumela kuphela umsebenzisi oyedwa ukuthi abhalise, esikhundleni seziningi nge-Touch ID njengakuqala.
Manje usungakwazi ukugcina i-iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus entsha
Namuhla ekuseni sivuke isitolo se-Apple online sivaliwe futhi lokhu ngokungangabazeki bekuyisandulela salokho ...
I-iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus Ingabe kufanele ushintsho?
Kukufanele impela ukuhweba i-iPhone 7 Plus nge-iPhone 8 Plus entsha. Kule ndatshana sikukhombisa wonke umehluko phakathi kwalokhu okubili.
I-iPhone 7 Jet Black ishibhile ukuthenga kunanini ngaphambili
Ngemuva kokuvuselelwa kwamanani nobubanzi be-iPhone sinezindaba ezimnandi, akukaze kube lula kangako ukuthola i-iPhone 7 Jet Black.
I-Apple ihoxisa i-iPhone 7 (PRODUCT) RED emakethe
Ezinyangeni ezimbalwa nj